Tanzanite - အပြာရောင်နဲ့ zoisite ၏ခရမ်းရောင်အမျိုးမျိုး - ခိုင်ခံ့ trichroism - ဗီဒီယို
Tags: Tanzanite, Zoisite
Buy natural tanzanite in our shop
Tanzanite တွင်းထွက် zoisite ၏အပြာရောင်နှင့်လည်းခရမ်းရောင်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ epidote အုပ်စုတစ်စုမှပိုင်ဆိုင်။ အဆိုပါကျောက်မျက် 1967 အတွက် Manuel d'Souza အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Manyara ဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းတန်ဇန်းနီးယား၏ Merelani တောင်ကုန်း၌တည်၏။ Arusha နှင့်တောင်ပေါ်မှာ Kilimanjaro ၏မြို့အနီး။ Tanzanite ၏တစ်ခုတည်းသောအရင်းအမြစ်ထို့ပြင်တန်ဇန်းနီးယားဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်သေးငယ်တဲ့သတ္တုတွင်းဧရိယာထဲမှာ။ ရှည်လျား7ကီလိုမီတာကျယ်ပြန့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်2ကီလိုမီတာ။ အဆိုပါ Mirerani တောင်ကုန်းအနီး။
တစ်ဦးကအံ့သြလောက်အောင်ခိုင်မာတဲ့ trichroism Tanzanite အပေါ်မြင်နိုင်သည်။ တခြားအပြာနှင့်လည်းခရမ်းရောင်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ကျောက်သလင်းတိမ်းညွတ်ပေါ် မူတည်. Burgundy ။ အခြားအလင်းရောင်အခြေအနေများအောက်တွင်ကြည့်ရှုအားပေးသည့်အခါဒါဟာအစကွဲပြားခြားနားပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ချောင်းအလင်းအကြောင်းမဲ့သည့်အခါအပြာရောင်ကိုပိုမိုထင်ရှားပေါ်လာပါသည်။ အဆိုပါခရမ်းရောင်အရောင်အက်ဒီဆင်တီထွင် illumination အကြောင်းမဲ့သည့်အခါအလွယ်တကူမြင်နိုင်သည်။ ယင်း၏ကြမ်းတမ်းပြည်နယ် tanzanite အတွက်တစ်ချိန်ချိန်မှာနီအညိုရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အပူကုသမှုအသုံးပြုပုံကအညိုရောင်အရောင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှပါ။ ဒါဟာနောက်ဆုံးတော့ကျောက်ကို၏အပြာရောင်ခရမ်းရောင်ထွက်တတ်၏။
Manuel d'Souza, Arusha တန်ဇန်းနီးယားတွင်နေထိုင်နေတဲ့အပ်ချုပ်သည်နှင့်အစိတျအပိုငျးအချိန်ရွှေတူး။ သူ Mirerani အနီးရှိခေါင်ပေါ်မှာအပြာနှင့်အပြာ-ခရမ်းရောင်ကျောက်မျက် crystals ၏ပွင့်လင်းအပိုင်းအစများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်း 40 ကီလိုမီတာအရှေ့တောင်ဘက်တွင် Arusha ၏။ သူဟာသတ္တုခဲ့ယူဆ peridot။ သို့သော်မကြာမီပြုလုပ်မဟုတ်ခဲ့သဘောပေါက်ပြီးနောက်သူက dumortierite ခဲ့ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ အဲဒီနောက်မကြာခင်ဂျွန်ရှောလုသည်ကျောက်ခဲတို့ကိုမြင်တော်မူ၏။ တစ်ဦးကနိုင်ရိုဘီ-based အတိုင်ပင်ခံဘူမိဗေဒပညာရှင်။
ထို့နောက်တောင်ကိုကင်ညာန်းကျင်ဒေသတွင်း၌ aquamarine တူးဖော်ခဲ့တဲ့ကျောက်မျက်ရွဲ။ နောက်ပိုင်းတွင်ကင်ညာ၏ဆာဗိုဧရိယာထဲမှာနာမည်ကျော်ပတ္တမြားသိုက်ရှာဖွေတွေ့ရှိသူရှောလု။ သူကဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ် dumortierite နှင့် cordierite ရှင်းလင်းစေပါတယ်။ သူ၏အဘမှနမူနာကိုစေလွှတ်။ , Hyman ရှောလု, New York မှာ Saks ပဉ္စမရိပ်သာလမ်းမှာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ။
Hyman ရှောလုသည်လမ်းပေါ်ဖြတ်ပြီးနမူနာဆောင်ခဲ့လေ၏။ အမေရိက၏ Gemological Institute မှရန်။ သူတို့ကနောက်ဆုံးမှာမှန်ကန်စွာ zoisite ဓာတ်သတ္တုအမျိုးမျိုးအဖြစ်အသစ်သောကျောက်မျက်ရတနာဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
မှန်ကန်သောဖော်ထုတ်ခြင်းဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ mineralogists ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဗြိတိသျှပြတိုက်အသုံးပြုပုံနှင့်နောက်ဆုံးတော့ Heidelberg တက္ကသိုလ်က။ ဒါပေမယ့်မှတ်ပုံတင်ညာဘက်ရရန်အလွန်ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ Ian McCloud ဖြစ်ခဲ့သည်။ Dodoma အခြေစိုက်တစ်ဦးကတန်ဇန်းနီးယားအစိုးရဘူမိဗေဒပညာရှင်။
သိပ္ပံနည်းကျ "အပြာ zoisite" ဟုခေါ်။ သူတို့ကရှားပါးအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်ချင်ခဲ့တယ်ကြောင့်ကျောက်မျက် Tiffany & Co အားဖြင့် tanzanite အဖြစ်အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုအခါကျောက်မျက်၏တစ်ခုတည်းတည်နေရာ။
1967 မှစ. tanzanite ၏ဖြစ်ကောင်းနှစ်ခုသန်းကာရက်တန်ဇန်းနီးယားမှာရှိတဲ့တူးဖော်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တန်ဇန်းနီးယားအစိုးရ 1971 အတွက်မိုင်းပြည်သူပိုင်။
Tanzanite (Synthetic forsterite) ဆွဲ
Tags: Forsterite, ဆွဲ, လက်လုပ်ဖြစ်သော, Tanzanite